Di Matteo: Waan la yaabay inaysan Chelsea hal ciyaaryahan ku laheyn liiska Fifa Bollon d’Or. - Caasimada Online
Home Warar Di Matteo: Waan la yaabay inaysan Chelsea hal ciyaaryahan ku laheyn liiska...
Di Matteo: Waan la yaabay inaysan Chelsea hal ciyaaryahan ku laheyn liiska Fifa Bollon d’Or.
Roberto Di Matteo ayaa daaha ka qaaday inuu la anfariiray ka dib markii ay Chelsea hal ciyaaryahan ku yeelan weysay 23da ciyaaryahan ee u sharaxan abaal marinta Fifa Ballon d’Or.
Weeraryahankii hore ee kooxda Blues Didier Drogba ayaa lagu soo daray liiskaan ka dib bandhigiisii cajiibka ahaa ee uu sameeyey 12kii bilood ee lasoo dhaafay, laakiin Di Matteo ayaa qaba inay aheyd inay helaan ciyaartoy intaas ka badan marka loo fiirsho guushoodii Champions League.
“Taas in yar ayaan ka xumaaday sababtoo ah waxaan nahay kooxdii ku guuleysatay Champions League waxaad fileysaa in lagu abaal mariyo bandhiga ciyaaryahanadeena,” ayuu yiri isagoo la hadlaayey website-ka rasmiga ah ee Chelsea.
“Wey adagtahay in halmar sharaxaad laga bixiyo. Ma hubo hadiisan safan kulamo badan oo caalami ah si wanaagsan.”
Di Matteo ayaa lagu daray liiska 10-ka macalin ee u sharaxan tababaraha sanadaka ee Fifa ka dib markii uu 42 jirkaani kooxdiisa ku hugaamiyey inay markoodii ugu horeysay taariikhda qaado Uefa Champions League.
Hadii weeraryahanka Barcelona Lionel Messi uu abaal marintaan ku guuleysto wuxuu noqon doonaa xidigii ugu horeeyey ee ku guuleysta afar mar oo isku xigta.